Posted: Adoolessa/July 20, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (2)
Gara mata duree barreeffama kanatti deebi’uudhaaf, wiirtuu ykn jiddugala qorannoo Afaan Oromoo qabaachuun bu’aan isaa waa baay’ee dha. Og-barruu ykn hojii aartii ittiin too’achuuf qofaa otuu hin taane, Afaan kana yeroodhaa yerootti guddina isaa hordofanii; hir’ina jiru hubatanii fala ykn mala barbaaduuf; akka inni guddatu taasiisuuf dhaabbatni akkanaa baay’ee barbaachisaa qofaa otuu hin taane murteessaa dhas jedheen amana. Afaan keenya hacuuccaa diinaa keessaa bahee; awwaalamuuf bool’oo qarqara gahe sanarraa dandamatee sadarkaa kanarra kan jiru dhiisii, warri diingadee fi teeknoolojiidhaan guddatanuu yeroodhaa yerootti guddina Afaan isaanii too’achuudhaan jijjiirama isaa (language reform) irratti hojjetu. Kanaaf, nutis Afaan keenya akka qulqullaayu, guddatu fi dagaagu; akka abbaa horatu; akka mararfannoo argatu dhaabbata guddina isaa hordofu, tooa’tu fi guddisu – wiirtuu qorannoo Afaan Oromoo ijaarrachuun dirqama ta’a.
Yaadi ati dhimma Afaan Oromoo ilaalchistee kennitte baa`ee nagammachiisee jira. Galata argadhu!!
Najiib Sulleiman Reply
Abdi Boruu akkamalee galatoomi, barruun tee barruulee akkamalee ija na harkifte keessaa isii takka. Mee gara yaada kiyyaatti achi cahuu koo dura himoota ijoo tahan kan siin barreeffamaniin akka ati barreessitteetti barreessuudhaan haa jalqabu.
“Gama tokkoon Afaan keenya waalteessuuf yaadni fi tattaafiin otuu jiruu gama biraatiin garuu waalteessuun hafee kanuma beeynu sanaayyuu seeraa alaan barreessuun Afaan keenyatti mudaa uumaa jira ja’een yaada.”
“wanti asirratti hubatamuu qabu, waalteessuu Afaan keenyaa bira otuu hin gahiniyyuu waanuma beeknu sanaayyuu sirnaan barreessuu dadhabuun Afaan Oromootti mudaa hora jachuu dha.”
“Waayeen kun dhimma ummataa ykn Saba Oromoo waan ta’eef, akka dhimma biyyoolleessaatti ilaaluun dirqama Oromummaa ti jadheen amana.”
Mee gaa ammaas gara yaada kiyyaatti achi haa chahu. Yaada ati barruu tana irraa barreessiteef gutumaafi guututti nan fudhadha. Yaada Afaan keenya Afaan Oromoo waalteessuudhaaf wiirutuu takka barbaachisuudhaa, dhibbaa-dhibbatti nan fudhadha. Maaliif yoo janne, Afaan Oromoo yaroo dheeraadhaaf haccuuccaa mootummoottan alagaa jalatti kufudhaan hiree guddachuu arkachuu dhiisii itti dubbachuunuu yakka akka tahe seenaa fagoo osoo hin tahin waan dhihootti waliin yaadannu tokko.
Kanaafuu, Afaan Oromoo dandamata amma arkate kanaan Hayyoonniniifii Beektoonni Oromoo hundi irratti hirmaachuudhaan wayyeessuufi waalteessuun kan barbaachisaa tahe argame. Asirratti milanaan osoo hin dhooyne bira kutuu hin barbaanne tokko, Hayyuuleenii fi Beektoonni Oromoo ammaan duraas tahe ammaas uumamaafi guddina Afaan kanaatiif lubbuu isaanii kannuudhaan qooda isaanirraa eeggamu bahaniif warreegama barbaachisu kafalan hundi galata guddaa dacha dachaan qaban. Kanneen akka Sheek Bakrii Saphaloo, Sheek Mohammed Rashaad/Rabbi Jannataan isaan haa qananneessuu/, Mahadi Hamid Muudee, Dr Xilaahuun Gamtaa, Dr Abdulsamed Mohammed kan Afaan Oromoo akka seerlugaa qabaatu jalqaba duraatif godhe dabalatee kanneen biratiis kan maqaan isaanii asirratti hin dhawwamin hundi seenaan yoomiyyuu isaan yaaddatti.
Yaada lama kan asirratti kannachuu barbaade keessaa inni duraa dabalata rakkoolee Afaan Oromoo akka hin guddanne mudaa tahaa jiranirratti taha. Kunis maali inni, akkuma ati jatteetti rakkoollee guddina Afaan Oromootti danqqaa tahan keessaa tokko, Afaanicha seeraa heera qabu kana danta dhabbummaan seeraa alaan barreesuudha. Fakkeenyaaf seera gubee dheertuu, gabaabduu, jabduufi laaftuu barreessuudhaa eeggachuu dhabuu yammuu tahu, kana cinatti ani ammoo wanti ida’achuu barbaadu tokko, eega wanta tokko barreessan booda, irra deebi’anii da-ddeebi’anii dubbisuudhaan sirreessuu dhabuun guddina Afaanichaatti danqqaa tahu qofa osoo hin tahin akka yaada ifa tahe tokoo sirritti hin dabarfanne nama taasisa. Kana jachuun koo gabaabdumatti, barruu takka yoo “proof reading” warri adiin ja’uu san irra daddeebi’udhaan hin godhamin, guddina Afaanichaatti fi yaada ifa tahe dabarfachuu irratti rakkoo guddoo uuma ja’een amana.Yaanni kiyya inni lamadaa, gara biraatiin jachoonni Afaan Oromoo irra caalaan isaanii innaa dheerrachuun ykn gabaabbachuun yokiniis ammoo laaffachuun ykn jabbaachuun hiikkaa gara garaa qabaachuu akka dandayan atuu fakkeenya kaasuun haala ifa tahe tokkoon ibsitee jirta. Asirratti ammaas wanti sirritti hubachuun nurra jiru tokkoo fii yaanni kiyya kan lamadaa kana fakkaata. Jachoota Afaan Oromoo keessaa haga muraasa tokkootu yoo dheerratanii gabaabbataniis ykn laaffatanii jabaataniis hiikkaan isaanii hin jijjiramneetu jara.
Fakkeenyaaf: Ammoo = Ammo
Oromoo = Oromo
Silaa = Sila
Abboo = Abbo
Akkaan = Akkan
Namaan = Naman
Armaan = Arman
Lakkooysa = Lakkoysa
Dheebuu = Dhebu
Ji’aan = Ji’an
Kanaafii kanneen kana fakkaattan jachoonni jabaattani, laaffatani, dheerratani ykn gabaabbataniis hiikkaa addaa qabaachuu hin dandeenyees ni jiran. Asirratti yaada lamadaa kiyyarratti gaafiin tiyya akkamitti haalli kun gad faggeenyaan xinxilamanii seera qabachuu dandayaniidha? yoo akkuma ati jatte wiirtuun Afaan Oromoo waalteessitu takka jiraatte malee.
Haala armaan olitti dhawe kana ifa godhuudhaaf fakkeenya hima tokko kaayuudhaaniin ibsuudhaaf yaala.
Fakkeenyaaf: 1/ Dhebu na jira = Dheebuu na jira. Nan dheeboodhe jachuudhaaf.
2/Gaafii arman gadi deebisi = Gaafii armaan gadii deebisi.
yaada kana kaasuun kiyya Afaan Oromoo akka innaa namoota adda addaatiin jachoonni tokko barreeffaman bifa ykn haala tokkoon barreeffamuudha qaban ja’ee waaniin amanuuf jacha.Seera haaltokkee ykn biftokkeedhaan barreeffamuu itti dandayaman jiraachuu qaban ja’een amana. ifduraaf akka Afaan Ingilizii sadarkaa ol’aanatti guddatee as gaye kanatti Afaan Oromootiis sadarkaa san guyu dandayuu qaba ja’ee waaniin amanuuf jacha. Kuniis yoo Hayyootaafi Beektootaan haala gadi jabbeenya tahe tokkoon kan irratti hojjatame tahe sababaan itti hin guddanne hin jiru amantaa ja’u waaniin qabuuf jacha.
Gara biraatiin mee barruu ati silaa barreessite tana ani yoo kaniin deebi’ee barreessu tahe akkan itti barreessu sitti haa garsiisu. Kana innaa ja’u haalli ati itti barreessite sirridhaami jachuu kootimi, san akkasitti akka naa hubatamuun barbaada.
Akka isaniin barreeffameetti Akka naan barreeffameetti
Akkan dhiyeesu ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Akkaan dhiheessu,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,qalbii kiyya,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,qalbii tiyya,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,kan dinqisifadhu fi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kan dinqisifadhuu fi
,,,,,,,,,jaalala, fadhi, beekkumsa fi,,,,,,,,,,,,,,,,,,Jaalala, fadhii, beekumsaa fi,,,,,
,,,,,,,,,kan dinqisifamuu dha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kan dinqisifamuudha.
,,,,,,,,,argachuu qabuu dha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,argachuu qabuudha.
,,,,,,,,,akka ilaalcha fi hubannoo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,akka ilaalchaa fi hubannoo,,,,,,,
,,,,,,,,,hubannoo kiyyaattii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hubannoo kiyyaatti,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,ani hubadhu fi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ani hubadhuu fi,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,yaroo baay’ee,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,yaroo baayyee,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,otuu qabuu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,odoo qabuu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,yaadni fi tattaaffiin,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,yaadninii fi tattaaffiin,,,,,,,
,,,,,,,,akkan hubadhutti,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,akkaan hubadhutti,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,akka ta’ee dha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,akka taheedha.
Hir’inni ykn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Irrinni ykn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,hubachuun barbaachisaa dha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hubachuun barbaachisaadha.
,,,,,,,,tokkon dhiyeessa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tokkoon dhiheessa.
Nama tokkotu nama biraatiif gaafii tokko dhiyeessa,,,,,Nama tokkootu nama biraatiif gaafii takka dhiheessa.
,,,,,,,,jirtu kan jadhuu dha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,jirtu kan jadhuudha.
Namtichi gaafii biraa dhiyeesse,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Namtichi gaafii biraa dhiheesse,,,,
,,,,,,,,hin ta’iniif jachuu dha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hin ta’iniif jachuudha.
,,,,,,,,kun fakkeenyoota baay’ee,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kun fakkeenyoota baayyee,,,,,,,,,,,
Waayyee akkanaatu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Waa’ee akkanaatu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,mudaa hora jachuu dha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mudaa hora jachuudha.
waayeen kun,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Waa’een kun,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,saba keenyaa ti,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,saba keenyaati.
,,,,,,,kanatti deebi’uu dhaaf,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kanatti deebi’uudhaaf,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,waa baay’ee dha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,waa baayyeedha.
Og barruu ykn hujii aartii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Hog barruu ykn hujii artii,,,,,,,,
,,,,,,,murteessaa dhas jadheen amana,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,murteessaadhaas ja’een amana.
,,,,,,,guddatu fi dagaagu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,guddatuu fi dagaagu,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,tooa’tu fi guddisu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,too’atuufi guddisu,,,,,,,,,,,,,,,
Garaa garummaa barruu teenyaa tana dhiheessuu koo, garaa garummaan uumamte rokkoo uumti jachuu barbaadee osoo hin tahin, namoonni adda addaa yoo kan waa’ee tokkorratti barreessan tahe, dhiiroo barruun nama sanaa hundi adda adda tahuun ni malaa ja’ee shakki waaniin qabuufi.Dhiiroo Afaan Oromoo akka Afaan warra Adii ykn Ingilizitti seera qabeessa gar-tokkee ykn bif-tokkee qabaachuu ni dandayaa? Gaafiin jattuu yeroo hunda na keessa da-ddeebiti. Gaafii tanaaf deebiin tiyya eeyyee ni dandayama. Akki itti dandayamu gabaabdumatti, yaanni ati barruu tana irraa barreessiteef guddina Afaan Oromootiif wiirtuun takka tan Hayyoota, Beektootaafi Ogeesoota Oromootiin jarmtee hujirra oolte. Wiirtuun tun tan Affan Oromoo seera bif-tokkee qabsiistee fooyyeessitu jachuudha. Tan garaa garummaa barru teenya lamaan idditti argamtu tanallee sirreessitu ja’een amana. Kanaafuu yaanni ati kaafte kun kan akkamalee deeggaramuudha. Garuu ammoo gaafii takka tan deebbisaa hin qabneefin gaaffaddee yaada kiyya kana xumura. Akkamitti wiirtuun tun tan Afaan Oromoo fooyyeesitu tun jaaramuuf teessi? Eenyuun dhiiroo jaaramuuf teessi? Dhiiroo yoon Sabboonaa Oromoo kan aadaa isaatifii guddina Afaan isaatii yaadee Saba isaatiif yeroo fi qabbeenya kannuufiin jaaramuuf teessi ja’u deebisaa tahinnaa laaata?